SOFIHA SWEDISH NGO – BOSASO – SOMALIA
Ujeeddo: Baaq Codsi sii deyn Boqor Cismaan Maxamuud Buur Madow
Hay’adda SOFIHA ee Swedhishka ah ee ka shaqaysa Nabadda , waxay Baaq Codsi ah u diraysa Maamulka Somaliland ka dib markii Ciidamadda Booliska ee Somaliland Xabsiga u taxaabeen Boqor Cismaan Maxamud Buur Madow.
Anagoo qirayna kaalinta Nabaddoonnimo ee Boqorka oo ah Nin ka mid ah Hogaamiye Dhaqameedka iyo Duubabka Ummada Soomaliyeed , ahna Boqor ku caanbaxay Nabad raadinta iyo xallinta khilaafaadka Ummadda Soomaaliyeed.
Waxaan shaki ku jirin kaalintii uu Boqorku ka qaatay heshiisiintii iyo dhexdhexaadintii Puntland , isagoo ku guulaystay in SOFIHA shahaado sharaf Gudoonsiisay ka dib markii uu Nabaddii taariikhiga ahayd ee Puntland wax kasoo hooyey.
Anagoo tixgelinayna Xoriyaadka iyo Madaxbannaanida gaarahaaneed ee Qofkasta oo Bini aadam ah leeyahay .
Anagoo eegayna dhawrista iyo ku xadgudub la’aanta Isimmadda ,diidaynana meelkaga dhaca sharafta Isimmada iyo Duubabka Soomaliyeed .
Anagoo Ogsoon hawsha Boqorku ka waday Hargaysa waqtiga la xiray oo uu ku hawshaysnaa Nabadayn ,xiisad demin , iyo dhexdhexaadin Labada Maamul ee Puntland iyo Somaliland .
Hadaba waxaan ka Codsanaynaa Maamulka Somaliland Anagoo ku hadlayna Magaca Samo falayaasha iyo Hay’adaha Nabadda ee ku hawlan Nabadda Ummadda Soomaliyeed in si degdeg ah oo shuruud la’aan ah lagu sii daayo Boqorka Nabadoonka ah Boqor Cismaan Maxamuud Buur Madow ee aan Mutaysan in nabad raadintiisa xarig loogu bedelo .
C/raxmaan Yuusuf Budul
Qoraaladii Hore ee Cawaale Jaamac